Vao tsy ela akory izay, ny vondron-javaboary guangxi water pump station conservation teknolojia teknolojia ny fifanakalozana fifanakalozana ara-teknolojia no nanokafana tamin'ny fomba ofisialy, ny fivoriana dia notarihin'ny guangxi ny famatsian-drano sy ny fikambanan-dàlana fiangonan'ny filoha mai xinfa, sekretera jeneraly zheng jiarong nanao kabary manan-danja sy fanovana ny angovo. fanentanana. Nanasa handray anjara amin'ny fifanakalozana ara-teknika i Shanghai kaiquan, izay nanamafy ny fahatakarana ny kaiquan amin'ny sampan-draharahan'ny rano.
Wang jian, filoha lefitry ny vondrona kaiquan, dia nampiditra ny toe-pandrosoana fampandrosoana sy ny fandaharam-potoana ho avy ary ny fandrafetana ny kaiquan ho an'ireo orinasa anaty rano mandritra ny kaonferansa, ary indrindra ny namerina namerina ny tolotra telo maimaimpoana nomen'ny vondrona kaiquan ho an'ny orinasan'ny rano.
1. Manome vahaolana fanavaozana fanavaozana angovo ho an'ny orinasan'ny rano maimaim-poana
Tamin'ny alalan'ny fikarohana sy ny fampandrosoana ny pump nuklezika dia nanangona traikefa be ny kaiquan. Tao anatin'ny telo taona lasa izay dia manatanteraka ny fanavaozana sy ny fampandrosoana ny paompy ampiasaina amin'ny zavamaniry rano izy ireo. Nahomby fantsom-bazaha roa vita amin'ny famolavolana marihitra marobe ary sakan'ny fahombiazana avo lenta, ny tahan'ny fandehanana 70% ka hatramin'ny 120%, ny fahombiazana ambony ary ny fisolokiana ambany. Ankoatr'izay, ny kaiquan dia afaka manangona mpanolo-tsaina manam-pahaizana 20 ao amin'ny vondrona, mpanolo-tsaina manam-pahaizana 260 sy orinasa fiaraha-miasa 600, ary manome vahaolana fanovana famonjena angovo ho an'ny orinasa mpamatsy rano mifototra amin'ny tombony azo avy amin'ny loharanon-karena matanjaka.
2. Fitaovana maimaimpoana maimaimpoana fitantanana rahona misokatra Internet Internet +
Raha ny fitakiana ny fampandrosoana ny trano sy ny fampandrosoana ambanivohitra, dia hotanterahina tsikelikely eo ambanin ny fitambaran-dàlana sy fampivondronana iraisana ny tranobe paompy faharoa, ary lalana sarotra ny fitantanana ny trano pump. Amin'io lafiny io, ny kaiquan dia nampiditra fidirana maimaimpoana mankany amin'ny lampihazo marani-tsaina, ary ny vokatra vita avy amin'ny mpanamboatra hafa dia azo jerena ihany koa amin'ny alàlan'ny fanavaozana (tsy mihoatra ny 3,000 yuan / apetraka ny vidiny.
Hisokatra tsy ho ela i Kaiquan sy ny fitaovana famatsiana rano madio, ankoatry ny fanaraha-maso ny horonantsary nentim-paharazana sy ny asa fitantanana ny angon-drakitra, dia nametraka ilay rafitra mahomby ny fampitandremana, fampitandremana diso, fitaovana hampiasa ny fitantanana ny fiainana.
3. Maimaim-poana ny rano fisotro hividianana rano amin'ny famoahana rano amin'ny famonon-drano ny tanàna
Taorian'ny 20 taona mahery ny fanandramana amin'ny famolavolana, ny fanamboarana, ny varotra, ny fandidiana ary ny fikojakojana ny fitaovana famatsiana rano, ny kaiquan dia manana fitaovana isan-karazany amin'ny famatsiana rano toa ny karazana boaty tsy misy tsindry ratsy, karazana tankina tsy misy tsindry ratsy, fiovam-po digital nomerika feno. sns., miaraka amin'ny famoahana fitaovana isan-karazany 5000 famatsiana rano, ary nandray anjara tamin'ny tetik'asa fanamboarana trano fako maro an-tanàn-dehibe. Eto i kaiquan dia manome consultation teknika maimaimpoana amin'ny departemanta rano izay mila ny firenena, dia manao fanadihadiana maimaim-poana momba ny sata miorina ao amin'ny efitrano fantsom-pahefana mialoha, ary miara-miasa amin'ny departemantan'ny rano hamaha ny olana sy ny fahasahiranana ao amin'ny efitrano fako taloha.